Amaokwu Baịbụl dị n’isiokwu a: Amaokwu maka Womenmụ nwanyị -> Ndụ
Bịa Dị Ka Are Bụ
Nnwere onwe ime nhọrọ
Agaghị m ahapụ gị
Atọ n'Ime Otu
Chụnanya na-enweghị atụ
Nje Virus / Ọrịa
Onye Chineke Bụ
Ezigbo agwa (+)
Obi ike / Obi Ike
Dọ aka ná ntị
Ala / Obi Umeala
Omume Ọjọọ (+)
Iji ike emegbu mmadụ
Onye ihu abụọ
Imegwara / Venbọ Ọbọ
Ime ihe ike
Ime na-ete ime
Ụ ọgwụ ọjọọ
Ndapụ n'ezi ofufe
Nọ Nanị Gị
Mkpakọrịta nwoke na nwaanyị
Alụmdi na nwunye
Ibute Chineke ụzọ
Amaokwu Maka Menmụ nwoke
Amaokwu maka Womenmụ nwanyị
Ndị inyom di ha nwụrụ
Ndị nkuzi ugha
Mezaịa Na Baịbụl
Ndi ozuzu aturu
Inye otu ụzọ n'ụzọ iri
Ọrụ Ndị Nwanyị
Ihe omimi (+)
Ewepụghị / Gburugburu .wa
Refeyim na Bible
Oge Ikpeazụ / Ọdịnihu
Ndị mmụọ ozi na ndị mmụọ ọjọọ (+)
Ndị isi ndị mmụọ ozi
Ndị mmụọ ọjọọ
Ndị mmụọ ozi na-eche nche
Dibịa afa / Ime Anwansi
Ihe ngosi mgbakọ na mwepu (+)
Mmanya na-aba n'anya
Iri anụ mmadụ
Inyere Ndị Ogbenye Aka
Ndị uwe ojii
Gamlụ karịa otu nwanyị
Igbu onwe onye
Ndụ: [Amaokwu maka Womenmụ nwanyị]
1 KỌRINT 11:12
Nꞌihi na ọ bụ ezie na nwanyị mbụ si na nwoke pụta, ma ọ bụ ụmụ nwanyị na-amụ ụmụ nwoke nile, nwoke na nwanyị nile sitekwara nꞌebe Chineke onye kere ha nọ na-abịa.
Ọṅụ dịịrị nwanyị ahụ kwenyere na Chineke ga-emezu ihe o kwere nkwa ime.”
1 PITA 3:1-2
 Unu ndị inyom nwere di na-eruberenụ di unu isi nꞌihi na ọ bụ site na mmeso unu na-emeso ha ka ndị na-ekweghị nꞌokwu Chineke nwere ike ikwere. Ndụ ọma unu na-ebi pụrụ ime ka ha chegharịa karịa okwu ọnụ ọ bụla unu ga-agwa ha.
 Unu bụ ndị nwanyị a na-alụ alụ, doonụ onwe unu nꞌokpuru di unu dị ka unu si doo onwe unu nꞌokpuru Onyenwe anyị. Nꞌihi na nwoke bụ isi nwụnye ya, dị ka Kraịst siri bụrụ isi nzukọ ya bụ chọọchị, na onye nzọpụta nke nzukọ ahụ bụ anụ ahụ ya.
 Nꞌotu aka ahụ, gwa ndị agadi nwanyị ka ha na-eme omume dị ka ụmụ nwanyị dị nsọ. Ka ha ghara ịbụ ndị na-akpa asịrị, na ndị na-aṅụbiga mmanya oke. Ka ha na-akụzi ihe dị mma. Ọ bụ ha kwesịrị ịzụpụta ụmụ agbọghọ ka ha nwee uche zuru oke, bụrụ ndị na-ahụ di ha na ụmụ ha nꞌanya. Ka ha bụrụkwa ndị akọnuche ha zuru oke, ndị dị ọcha nꞌobi, ndị bụ ezi nwụnye na-edozi ezinụlọ di ha, ndị na-edo onwe ha nꞌokpuru di ha, ime ka onye ọ bụla ghara ikwulu ozi ọma Chineke.
1 TIMỌTI 2:9-15
 Achọkwara m ka ndị inyom chọọ onwe ha mma nꞌụzọ uche zuru oke, nꞌihe gbasara uwe ha na-eyi na omume ha. Ihe e kwesịrị iji mata ndị inyom Kraịst abụghị otu ha si kpaa isi ha, ma ọ bụ ụdị uwe mara mma ha na-eyi ma ọ bụkwanụ ụdị ihe olu ma ọ bụ mgba nꞌaka ha na-eyi, kama ọ bụ ụdị ndụ ha na-ebi. Ndụ obi ọma na ịdị mma. *** Ndị inyom kwesịkwara iji obi dị umeala na obi dị nwayọọ gee ntị mụtakwa ihe mgbe a na-ezi ihe. Ekweghị m ka nwanyị zi ndị ikom ihe, ma ọ bụ ka nwanyị bụrụ onyeisi nꞌebe ndị ikom nọ. Ha kwesịrị ịnọ nwayọọ mgbe ọ bụla unu zukọrọ. Nke a ọ̀ bụ nꞌihi gịnị? Ọ bụ nꞌihi na Chineke buru ụzọ kee Adam tupu o kee Iiv. Ọ bụkwaghị Adam ka ekwensu ghọgburu, kama ọ bụ Iiv ka ọ ghọgburu mee ka o mebie iwu Chineke. Ma ọ ga-azọpụta ndị inyom site nꞌọmụmụ nwa ha ma ọ bụrụ na ha anọgide na-ebi ndụ okwukwe na ịhụnanya, na ịdị nsọ, na nke uche zuru oke.